IzeMpilo: ukuxilwa kweengcingo eziqhutywe yi-dopamine | Umvuzo weZiseko
Ikhaya impilo Ibhalansi kunye nokungalingani
Umzimba ufuna ukulinganisela ukugcina amanqanaba ombane kwaye ugcine zonke iinkqubo zawo zokusebenza. Kuyo nayiphina inkqubo enye le nkqubo ibizwa homeostasis. Umzekelo abantu abadala bafuna ukulala iiyure eziyi-6-8 kunye nokufikisa kufuna ngaphezulu. Bafuna ukulala ukuze bancede ingqondo nomzimba uzibuyise, benze naluphi na ulungiso, badibanise iinkumbulo kwaye baphilise. Umzimba ugcina amanqanaba eswekile yegazi, uxinzelelo lwegazi kunye namanzi kwinqanaba elingaguqukiyo kuluhlu olumxinwa. Xa iinkqubo ezininzi zinxibelelana zize zilawule phakathi kwazo ukugcina ibhalansi kwaye zilungelelanise njengoko iimeko zitshintsha, inkqubo ibizwa njalo allostasis. Yinkqubo enamandla kakhulu yokulinganisela, ukulawula iinkqubo ezininzi ngexesha elilodwa.
Kwenzeka ntoni ngokukhulu kakhulu, kuncinci okanye kumanqanaba afanelekileyo e-dopamine.
Sinokuyonwabela 'imivuzo' yokutya okanye isondo. Xa sanele ngokwaneleyo ukuhlangabezana neemfuno zethu zomzimba, ubuchopho bethu buthumela isignali yesigxina esisitshela ukuba siyeke. Emva koko sinokuqhubeka kunye neminye imisebenzi eyimfuneko yokuphila kwansuku zonke. Ukuba asiyihoyi iimpawu kwaye siqhubeka, sinokuwuphonsa umzimba ngaphandle kwemali. Ngokomzekelo, xa siqhubeka 'sithintela' kwizinto okanye ukuziphatha, umatshini wokukhathala unokufakwa kwixesha elifutshane. Ukuxhaswa kugqityiwe. Ngamanye amazwi, ingqondo yethu ingaqala ukutolika ukuxilwa njengento 'yokusinda'. Ngoko unokusenza sivumele ukuba siqhubeke sizithobela okwethutyana. Cinga ibhere ngaphambi kokuba ubusike ubusika xa uginya i-salmon ye-20 ngexesha ngaphandle kokugula. Okanye cinga ngethuba lokumanyanisa entwasahlobo xa izilwanyana ziza kufuna ukutshiza amaninzi amaninzi kunokwenzeka.
Isibalo sokubaluleka asipheli
I-intanethi ye-intanethi ibonakala kwingqondo njengexesha lokuxhatshaza, kodwa ixesha lokukhula elingapheliyo. Khumbula ukuba ubuchopho bethu bokuqala buguquke ngexesha lokunqongophala. Ubomi bokuqala bubona i-intanethi ye-intanethi njengento 'yokudliwayo'. Leli thuba elikhulu, elikhululekile lokuchumisa, elisiqhubelayo 'ukulifumana ngexesha lokufumana okuhle'. Ngokuhlala utywala, ingqondo iguqulela i-bonanza engakaze ibe nayo ngaphambili njengento yokuphila. Ngokukhawuleza uza kufuna ukulungelelanisa ngokuguqula indlela yokucwangcisa ingqondo.
Iinkampani ze-intanethi zisebenzisa i-intanethi yocwaningo olululo olusetyenziswe ukwenza umkhwa owenza iimveliso ezigcina silindile. Khangela oku Intetho yeTED nguNir Eyal.
Ingqwalasela yethu imodeli yoshishino ye-intanethi ngokweSir Tim Berners Lee, uyise wewebhu jikelele. Ixabiso labo kubathengisi linjengegolide. Akukho nto enjengomdlalo wamahhala okanye ividiyo kwi-intanethi. Njalo xa sichukumisa 'ufana' kwijelo loluntu okanye ubukele ividiyo entsha, amakhulu eenkampani ziqokelela le datha kwaye zakha iprofayili kuthi. Xa siba ngumlutha kwi-intanethi, baninzi imali abathengisi abasenzayo kuthi. Umlutha kuthetha ukuba sincinci kunye nengqondo yengqondo ekhoyo ukuze sifunde izakhono, zenzele imali okanye senze umsebenzi.
Iziphumo zengqondo >>